Filtrer les éléments par date : vendredi, 08 mai 2020
vendredi, 08 mai 2020 21:43
Mpamaky trano sady mpanolana: Dimy lahy nidoboka amponja ao Tsiafahy
Voasambotry ny Zandary ireo andian-jiolahy mitam-piadiana mamaky trano sady manolana, nampitaraina ny mponina tamin’iny Kaominina Ambohimanamboka sy Anjeva Gara, Antananarivo Avaradrano iny.
Dimy lahy no efa voasambotra ary tazomina am-ponja any Tsiafahy, raha mbola misy roa izay nanana ny basy no tafatsoaka, ka mbola karohina.
vendredi, 08 mai 2020 21:35
Covid-19: Nahavita fitiliana 65 625 ny nosy Maorisy
Tsy nahitana tranga vaovao olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 atsy amin’ny nosy Maorisy tato anatin’ny 24ora. Roa sisa ny marary tsaboina ao an-toerana tamin’ireo 332 voamarina fa mitondra io tsimokaretina io.
Nahavita fitiliana 65 625 ry zareo Maorisiana nahafahany nifehy ny fihanak’ity valanaretina ity. Efa miverina tsikelikely ny asa fihariana ataon’ny mponina ao an-toerana.
vendredi, 08 mai 2020 20:32
Toamasina: Fitsidihana voalohany nataon'ny Filoha Andry RAJOELINA mandritra ady Covid-19
Feno dia feno ny Programan'ny Filoham-pirenena nandritra ny fitsidihany an'i Toamasina ny alakamisy 07 may 2020:
- Nanoloana ny Lapan'ny tanana: Fanokafana ny asa Fitiliana faobe karakaraina ho an'ny vahoakan'i Toamasina. Marihina fa miakatra be ny isan'ny olona voatily ka mitondra ny otrik'aretina Coronavirus eto Toamasina;
- Manoloana ny Biraon'ny Paositra Be: Fanokafana ny fizaràna ny TOSIKA FAMENO;
- Tao amin'ny EPP Maurice Guyot araben'ny Fahaleovan-tena:
Fanolorana ireo Raki-bolana na dictionnaires miisa 18 000 anjaran'ny Faritra Atsinanana;
- CHU Hôpitaly-Be Analankininina: Fitsidihana ny "Centre de traitement des déchets medicaux", sy fandraisana ireo fitaovam-pitsaboana avy amin'ny mpiara-miombon'antoka;
vendredi, 08 mai 2020 20:21
Andranomena-Antananarivo: Mpitondra scooter maty voahitsaky ny kamiao
Nandriaka ny rà teo amin’ny arabe « digue » Andranomena afaka ny tetezana mandika ny reniranon'i Mamamba, io takariva io. Lehilahy iray, nitondra moto scooter, no maty tsy tra-drano voahitsaky ny kamiao lehibe.
vendredi, 08 mai 2020 19:44
Lalam-pirenena faha-4: Jiolahy nanakana fiaran’ny Tafika, roa voasambotra
Fiara nitondra miaramila 11 ao amin'ny 1/RM4 hamita iraka no nosakanan'ny jiolahy teny amin'ny lalam-pirenena faha-4, teo anelanelan'ny Ambalajanakomby sy Tsaramandroso ny 7 may 2020.
Voasambotra ny roa lahy tamin’izy ireo ary efa naterina eny amin'ny tobin'ny Zandary raha vaky nandositra ny ambiny.
vendredi, 08 mai 2020 15:35
Antananarivo Renivohitra: Nolavin’ny Mpanolontsain’ny Tanàna ny hananganana tsangambato Tagnamaro
Nolavin’ny Mpanolontsain’ny Tanàna ny hananganana tsangambato manamarika ny tsingerintaona voalohan’ny Tagnamaro, hetsiky ny olompirenena, tetikasan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina.
Hifarana anio rehefa naharitra hateloana ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ny Filankevitry ny Tanànan’Antananarivo.
vendredi, 08 mai 2020 15:04
Covid-19: Misy mpiasan’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena voa
Misy mpiasa ao amin’ny foiben’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak’asa Anosy, voan’ny Coronavirus. Nanamafy izany amin’ny tambazotran-tserasera ny Talen’ny kabinetran’ny minisitra. Efa manaraka fitsaboana ao amin’ny Hopitaly Befelatanana io mpiasa marary io amin’izao fotoana izao.